ramadaan kariim & gabay uu tiriiyay cabdulaahi suldaan timacade
Subject: ramadaan kariim & gabay uu tiriiyay cabdulaahi suldaan timacade Wed Aug 11, 2010 6:05 pm
salaamu calaykum maanta oo ay tahay ramadaan kowdeed waxan aan jeclaystay in aan sxbayaal in ayar oo murti somaliyed oo uu inoo marin doono cabdilahi suldan timade ale ha una xariistee aan isxasuusino geerarkan waxa layidhaa casiisaw waa mahadaa Timacade wuxu geeraarkan inagu tusaaleynayaa awooda Eebbe ee aan koobnayn. Geeraarkan waxa inooga muuqaneysa aqoonta qotada dheer ee Timacadde u lahaa diinta. Wuxuu ina tusaaleynayaa jirrabkii iyo dhibaatooyinkii la soo mariyey Nebiyada iyo siduu Eebbe ugu hiilliyey, wuxu yidhi :
Ilaahi cirka taagayee
Dayaxa iyo cadceeddiyop
Xiddigaa ku cigaalayow !
Ilaahi caadil ahaaye
Dhulka caynkan u daadshaye
Ku culaysiyey buurta e
Isagoon cidi joogin
Casiiskii Nebi Aadan
Ka buuray cammuudda e
Intuu caaro ka jeebay
Cadkii Xaawa ka yeelayow
Ciyaarsiiyay buxuurta e
Ceejiyee ama siiyayow
Ilaahii caadil ahaaye
Kuwii caasi gareeyay
Amaba ceebta yiqiinnay
Habeen cawda u gooyayow
Dabayshuu carbiyayow !
Cilmigiisa ku qaadaye
Cashaduu iman doonana
Cawar seef ugu dhiibayow
Cudurkii uu ku raajay
Marki uu caban waayey
Caafimaad ugu doorshay
Raxmaddii ku dul caastay
Cusbeysiiyey Jidhkooda E
Caruusiinta ka yeelayow ahadaa
Subject: Re: ramadaan kariim & gabay uu tiriiyay cabdulaahi suldaan timacade Fri Aug 13, 2010 12:03 pm
waaw waaa gabay yaab badan aniga waxaan ka mid ahay dadka sida ween oola dhaca gabayada timacade alaah aa u naxariisteee.
Subject: Re: ramadaan kariim & gabay uu tiriiyay cabdulaahi suldaan timacade Sun Aug 22, 2010 9:28 am
Subject: Re: ramadaan kariim & gabay uu tiriiyay cabdulaahi suldaan timacade